एसिडमा ईमेल: ईमेल परीक्षण, समस्या निवारण र उत्तम अभ्यासहरू Martech Zone
एसिडमा ईमेल: ईमेल परीक्षण, समस्या निवारण र उत्तम अभ्यासहरू
बुधबार, मार्च 23, 2016 आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
२०१aमा ईमेल मार्केटिंगमा अधिक कम्पनीहरूले अधिक समय र पैसा खर्च गर्ने योजना गरेको एउटा कारण छ: ईमेल मार्केटिंग सबै डिजिटल मार्केटिंग च्यानलहरूको उच्चतम ROI होल्ड गर्न जारी राख्दछ.
प्रत्येक बजारमा उनीहरूको मनपर्ने ईमेल सेवा प्रदायक र ईमेल विकास चेकलिस्ट हुन्छ। तर प्राय: प्राय: तिनीहरू अभियानको क्रुक्सलाई बेवास्ता गर्दछन्: अभियान प्रयोग गर्न सेट गर्नु अघि धेरै यन्त्रहरू र ग्राहकहरूको बीचमा उनीहरूको ईमेलको परीक्षण गर्ने। जहाँसम्म धेरै परीक्षण अभियानहरू उनीहरूको आईफोन वा जीमेल ईनबक्समा ईमेल पठाएर, यो पर्याप्त छैन। किन? किनभने हरेक ईमेल ग्राहकले फरक तरिकाले कोड रेन्डर गर्दछ।
एसिड सिंहावलोकन मा ईमेल
एसिडमा ईमेल ईमेल परीक्षण, समस्या निवारण र उन्नत प्रदान गर्दछ विश्लेषण उपकरणहरू कम्पनीहरूको मद्दतको लागि सरल र तिनीहरूको ईमेल मार्केटिंग प्रयासहरू सुधार गर्न। कम्पनीले campaigns 45 फरक ईमेल ग्राहकहरू र उपकरणहरूमा ईमेल अभियानहरूको परीक्षण गर्दछ र रेन्डरिंग मुद्दाहरूको समाधानका लागि उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। २०० in मा स्थापना भएको, एसिडमा ईमेलले विश्वभरि 2009०,००० भन्दा बढी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको ईमेलहरू परीक्षण गर्न मद्दत गरेको छ।
मार्केटरहरूले एसिडमा इ-मेल प्रयोग गर्दछ स्क्र्याचबाट र कुनै पनि ईमेल सेवा प्रदायक भित्र सिर्जना गरिएको टेस्टिंग ईमेलहरू सरलीकृत गर्न। तर त्यो सबै होइन Ac एसिडमा ईमेलले अन्य उपकरणहरूको एक बिभिन्न प्रदान गर्दछ, सहित:
लिंक र छवि मान्यीकरण
कोड विश्लेषण र एक HTML अनुकूलक
असंख्य वेब ग्राहकहरु र मोबाइल उपकरणहरुमा वेब पेज पूर्वावलोकन
यसको उपकरणहरूको कोर सूटको अतिरिक्त, एसिडमा ईमेलले असंख्य संसाधनहरू र अतुलनीय ग्राहक समर्थन प्रस्ताव गर्दछ। ईमेल मार्केटर्स, कोडरहरू र डिजाइनरहरू मिलेर बनेको एउटा समुदाय फोरम कसैलाई पनि उपलब्ध छ, नि: शुल्क। र एसिड रिसोर्स सेन्टरको ईमेलले नि: शुल्क उत्तरदायी र हाइब्रिड फ्लुइड ईमेल टेम्प्लेटहरू, गाईडहरू, ह्वाइटपेपरहरू र अधिकको एक पुस्तकालय होस्ट गर्दछ।
ईमेल परीक्षणको महत्व
ईमेल ग्राहकहरू र मोबाइल उपकरणहरूले HTML फरक प्रदर्शन गर्दछ किनकि हरेक ग्राहकले यसको विशेष तरिकामा HTML रेन्डर गर्दछ। त्यसकारण तपाईंको कोडलाई आउटलुकमा ठिकसँग छोडिन्छ तर तपाईंको जीमेल ग्राहकमा सुन्दर देखिन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो अभियान तैनाथ गर्नु अघि कोडिंग र डेलिभरेबिलिटी मुद्दाहरूको निदान गर्न जाँच गर्नुहुन्न भने, तपाईंको ईमेल संलग्नता (र ब्रान्ड र आरओआई) नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। वास्तवमा, of० प्रतिशत व्यक्तिहरू भन्छन कि यदि उनीहरूले ईनबक्समा राम्रोसँग रेन्डर गरेन भने तत्काल ईमेल मेटाउनेछ।
ईमेल विकास उत्तम अभ्यासहरू
यदि तपाई इ-मेलको संसारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यी सबै जानकारी थोरै भारी पाउनुहुनेछ। आधुनिक वेब कोडिंग टेकनीकहरूको ईमेल क्लाइन्टहरूमा कुनै समर्थन हुँदैन र यस बीचमा मानिसहरूले तपाईंलाई टेबुलहरू प्रयोग गर्न भनिरहेका छन्। यहाँ कुरा हो, ईमेल कोडमा टेबुलहरू आवश्यक हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूमा विशेषज्ञ बन्ने योजना गर्नुहोस्। केहि अन्य पोइन्टर्स:
एकल स्तम्भ डिजाइन जीवन सजिलो बनाउँछ! यो प्रायः ईमेलहरूको लागि पर्याप्त छ (न्यूजलेटरहरू एक अपवाद हो) र मोबाइल उपकरणहरू समायोजित गर्न सजिलो बनाउँदछ।
चौडाइको लागि p००px प्रयोग गर्नुहोस् धेरै जसो वेब र डेस्कटप ग्राहकहरूमा राम्रोसँग फिट हुन। साइज मिडिया क्वेरीहरू वा फ्लुइड हाइब्रिड डिजाइन प्रयोग गरेर मोबाइल स्क्रिनहरूमा फिट हुन साइजलाई मापन गर्न सकिन्छ (त्यसका बारे थप पढ्नुहोस्)।
जब श doubt्का लाग्छ, टेबल। डिभ्स र फ्लोटहरू बिर्सनुहोस्। तालिकाहरू एक विश्वसनीय लेआउट प्राप्त गर्न सबैभन्दा विश्वसनीय तरीका हो। यो प्रविधी उत्तरदायी र तरल पदार्थ डिजाइनको आधार हो र तपाइँ तपाइँको डिजाइन को संरचना मा प structure्क्तिबद्ध विशेषता को फाइदा लिन अनुमति दिन्छ।
जाभास्क्रिप्ट, फ्ल्यास, फारमहरू र अन्य जटिल CSS / HTML लाई बेवास्ता गर्नुहोस्। जाभास्क्रिप्ट र फ्ल्यास ईमेल क्लाइन्टहरूमा पूर्ण असमर्थित छन्। नयाँ कोड, जस्तै HTML5 र CSS3, का सीमित समर्थन छ तर सम्भव छ (र रमाईलो!) प्रयोग गर्नका लागि हो… सावधानीका साथ, अवश्य।
मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस्। केही डिजाइनरहरू "मोबाइल पहिलो" डिजाइनमा स्विच गरीएका छन्। यो दृष्टिकोण खास ईमेलको लागि जस्तै पासवर्ड रीसेट, लेनदेन ईमेल, र खाता अपडेटहरूका लागि सफल छ।
र एसिडमा ईमेल भर्खरै एक जारी गरियो नि: शुल्क, वेब-आधारित ईमेल सम्पादक। यस सम्पादकले प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तविक समयमा एकल अनुप्रयोगमा ईमेलहरू निर्माण, सम्पादन, पूर्वावलोकन र अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
ईमेल कोडिंग मुश्किल हुन सक्छ। तपाईको इमेल जताततै ठिक देखिन्छ भन्ने निश्चित हुनु नै यो परीक्षण गर्नु हो। एसिडमा ईमेलले यसको साथ मद्दत गर्न सक्दछ सबै email० सेकेन्ड भन्दा कममा सबै सबैभन्दा लोकप्रिय ईमेल ग्राहकहरू र उपकरणहरूमा तपाईंको ईमेलको स्क्रीनशटहरू उत्पादन गरेर।
ईमेल परीक्षण सेवाहरूको अतिरिक्त, एसिडमा ईमेलले कुनै पनि मुद्दाहरूको लागि समस्या निवारण सुझावहरू र सूचना प्रदान गर्दछ, पूर्व तैनाती स्प्याम परीक्षण, र पोस्ट डिप्लोइमेन्ट उन्नत ईमेल विश्लेषण। कम्पनीले पनि उत्कृष्ट विषयहरूलाई कभर गर्ने ब्ल्ग लेख्दछ HTML ईमेलमा समस्या निवारण लाइन लम्बाई or उत्तम ईमेल विकास ट्रिकहरू र ह्याक्सहरू.
ईमेल ग्राहकहरु र उपकरणहरु को भरखरै संग, ईमेल परीक्षण सुविधा छैन; यो एक आवश्यकता हो। तपाईंको ईमेल प्रयासहरू अर्को तहमा लैजानुहोस्।
एसिडमा ईमेलको नि: शुल्क सात दिनको परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्!
टैग: ईमेलईमेल निर्माणकर्ताईमेल डिजाइनईमेल विकासईमेल सम्पादकएसिडमा ईमेलईमेल रेन्डरिंगईमेल परीक्षणईमेल चौड़ाईमोबाइल ईमेलवेब-आधारित ईमेल सम्पादक
रोबो: कसरी आज खरीदारहरू अनलाइन र अफलाइन खरीद अनुसन्धान
अप्रिल 18, 2016 मा 10: 19 एएम
राम्रो सुझावहरू! एक उत्तम उपकरण जस्तो लाग्छ, जबकि म पहिले नै getResponse प्रयोग गर्दैछु। ईमेल अभियानको A / B परीक्षण गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। केहि राम्रो देखिन्छ कि अरुको विचारमा नहुन सक्छ।